महानायक विवादमा नम्रताको प्रश्न ‘किन हो मै ठूलो भन्ने घमण्ड’ ? – Sunaulo Nepal TV
महानायक विवादमा नम्रताको प्रश्न ‘किन हो मै ठूलो भन्ने घमण्ड’ ?
काठमाडौं । महानायक र महानायिका विवादलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा चलेको छ । फिल्म क्षेत्रका कलाकारहरु पनि यसैमा रमाइरहेका छन् । कतिले आफ्ना तर्क सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । फिल्म ‘डाँडाको बरपीपल’मा फिल्म निर्देशक शोभित बस्नेताले महानायकको प्रसंग उठाएपछि यो अहिले विवादको विषय बनेको छ । शोभित बस्नेतले एक टिभी कार्यक्रममा बिहीवार राजेश हमाललाई भेटेर उनी नै महानायक भएको बताए ।
फिल्म क्षेत्रमा नातावाद छ भन्ने नायीका नम्रता सापकोटाले महानायकको विवादमा प्रश्न उठाएकी छन् । उनी केही समय अघि विवाह नगरी बच्चा जन्माउन मन छ भनेर विवादमा आएकी थिइन् । उनको सो भनाई निकै चर्चित र विवादित बनेको थियो । अहिले उनले महानायक विवादमा पनि प्रश्न उठाएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसैको नाम उल्लेख नगरी एक स्टाटस मार्फत उनले प्रश्न उठाएकी हुन् ।
उनले यसलाई वेमौसमी विवाद भनेकी छन् । कोभिडले थलिएको फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुको सट्टा महानायकको बखेडा झिकिएको उनीहरुको आरोप छ ।महानायक विवाद चलिरहँदा यो हल्लीखल्लीतर्फ लक्षित गर्दै अभिनेत्री नम्रता सापकोटाले एकअर्कालाई किन सम्मान नगरेको र घमण्ड गरेको भन्दै फिल्मकर्मीलाई प्रश्न गरेकी छिन् । पब्लिक सामु आफ्नो इज्जतको ख्याल गर्न पनि नम्रताले सुझाएकी छिन् ।
Next निर्देशक सुदर्शन थापा र मोडल सुप्रियालाई बधाई, विवाह बन्धनमा बाँधिए